တစ်သက်မှာ တစ်ခါသာ ရောက်သင့်ပီး နောက် မသွားသင့်တဲ့နေရာ (သို့မဟုတ်) ရွှေစက်တော် – ရှအေလငျး
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ လုပ်စားဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာတွေကတော့ တန်ခိုးကြီး စေတီ ပုထိုး ရှိတဲ့ နေရာတွေပါပဲ။ ဘုရား ဝင်ဖူးလို့ ကားရပ်ထားရင် ကားပါကင်ဖိုး ကောက်တယ်။ ဓာတ်လှေကားနဲ့ တက်ရင် ဓာတ်လှေကားဖိုး ပေးရတယ်။ ဓာတ်လှေကားကြေးက သဒ္ဓါကြေး ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒီကြေးက အဆိုးဆုံးပဲ.. ထည့်လည်း ထည့်ရသေး နည်းရင်လည်း ငွေကောက်တဲ့ သူရဲ့ မျက်စောင်းထိုးပါ ခံရတယ်။ စေတီ ပုထိုးတွေမှာ အလှူ ငွေတွေ အများကြီး ရှိနေတာပဲ.
ဘုရားပြုပြင်မှု ဘာညာ သာရကာ အတွက် အဲ့ဒီအထဲကနေ သုံးပေါ့။ ဓာတ်လှေကားဖိုးကအစ ငတ်တီး လိုက်ကြနေတာ ကြတော့ တော်တော်လေး အရုပ်ဆိုး အကျီးတန်ရာ လူကဲ့ရဲ့စရာတွေ ဖြစ်နေပီ။ လှူ ဖို့ တန်းဖို့ လာတဲ့ သူဆီကနေ တောင်ပေါ် တက်ခပါ ကောက်ခံနေသလိုကြီး ခံစားရတယ်..။
မန်းလေး တောင်ပေါ်ဆို စက်လှေကားခ သဒ္ဓါကြေး ပေါ်တင် ကောက်တယ်။ စက်လှေခါးကို မပြင်ဘူး။ စက်လှေခါး အနီးတစ်ဝိုက် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ဘူး၊ ကိုယ့်စီးဘူးတဲ့ စက်လှေခါး ထဲမှာတော့ ပိုက်ဆံပေးပီးမှ စီးရတဲ့ အဲ့ဒီမန်းတောင် စက်လှေကားက အညံ့ဆုံးပဲ။ ဘုရားဖူးတွေကလည်း စိတ်မကြည်ကြဘူး..။ ငါးရာ တစ်ထောင်နဲ့ဆိုတော့လည်း ပြောမနေပါဘူးလေ ဆိုပီးတော့ အောင့်သည်း အောင့်သက်နဲ့ အလှူ ငွေ ထည့်ပစ်ခဲ့ကြတယ်..။
အလှူ ရေးမို့ မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာ လူကိုများ မအဘူးများ ထင်နေလား မသိဘူး ဆိုတဲ့ အပေါက်မျိူးနဲ့ ကြည့်ပစ်ခဲ့ကြတယ်. ကိုယ်အပါဝင်ပဲ။ ကုသိုလ်ရေး ဆိုတော့လည်း အပြောရတော့ အခက်သားလား.. မြန်မာလူမျိူးတွေရဲ့ ဗီဇမျိူးစေ့ကိုယ်က အင်မတန် အားနာ တတ်တော့ လုပ်စားသူတို့ အကြိုက်ဖြစ်နေတယ်.။ စေတီ ပုထိုးတွေမှာ ရှိတဲ့ အိမ်သာတွေ အားလုံး နီးပါးလောက် ညစ်ပတ် စုတ်ပေနေတာချည်းပဲ ။
အဲ့ဒီ အိမ်သာတွေကိုတော့ ပိုက်ဆံ ကောက်သင့်ပါတယ်.. ကောက်ပါ.. ဒါပေမယ့် ထိုက်ထိုက် တန်တန် ကောက်.. ထိုက်ထိုက် တန်တန်တော့ သန့်ရှင်းမှု လုပ်ပေါ့ ။ အခုတော့ ထိုက်ထိုက် တန်တန်တော့ ကောက်တယ်.. မဝင်ရဲ လောက်အောင် ညစ်ပတ်လွန်းနေတာချည်းပဲ..။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ဂေါပကတွေ သီးသန့်သုံးတဲ့ သော့ခတ် ထားတဲ့ အိမ်သာလေးတွေက သန့်နေတာများတယ်။ ကျူ ပ်တို့ နိုင်ငံက ဘုရား ပုထိုး ရောက်လို့ အိမ်သာ သန့်သန့်လေး တက်ချင်ရင်တောင် ဂေါပကကို ခ ရတဲ့ နိုင်ငံဗျ။
ကိုယ်ကတော့ ရှင်းတယ်.. တန်းခိုးကြီး ဘုရားတွေကို ညအိပ် ခရီး သွားဖူးတော့မယ် ဆိုရင် ဝမ်းချူ ပ်စာတွေ စားလိုက်ပီး ဝမ်းချူပ်အောင် လုပ်ထားလိုက်တယ်.. ကျောင်း ပြန်ရောက်မှ ဂမ်းနှုတ်ဆေး ပြန်စားတယ်..။
ဒါတွေ အားလုံးဟာ ကန်ထရိုက်တွေ ပေးထားခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိူး တွေပါပဲ။ နေရာစုံကို ကန်ထရိုက်တွေ ပေးထားတော့ ဘုရား ဂေါပကတွေက ဝင်မပြောရဲတော့တဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေတော့ စည်းကမ်းက ပျက်ချင်သလို ပျက်နေတာ။ တန်းခိုးကြီး ဘုရားတွေမှာက ငွေက အဲ့ဒီလောက် အငမ်းမရ မလိုတော့ပါဘူးဗျာ..။ လောက်ငှနေပါပီ.. အဲ့ဒီတော့ ဘုရား လာတဲ့ သူတွေ ကုသိုလ်ရေးကို စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ လုပ်နိုင်အောင် ဘုရားကို အာရုံ ကောင်းကောင်း ပြုနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင် အားလုံးလည်းကောင်း ဘုရားဖူးရခြင်းရဲ့ တကယ့် အရသာကိုလည်း ခံစားရမှာပါ။ အစိုးရပိုင်းတွေက ဒါတွေကို လျစ်လျှူ ရှု မထား သင့်ပါ..
နိုင်ငံတကာက ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို စိတ်ပါ ဝင်စားလို့ လာရောက် လေ့လာ သူတွေ အတွက် မစွဲဆောင် နိုင်တဲ့ အပြင် နိုင်ငံရော လူမျိူးပါ သိက္ခာကျ စရာတွေ ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ ကိုယ်က ဘုန်းကြီးတန်မဲ့ ဝင်ပြောနေရတာပါ.. ကိုယ်လည်း နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ပဲလေ. ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက အရှက်ရ စရာ ကိစ္စ တွေကို ရပ်ကြည့်မနေနိုင်လို့ပါ..။
ကျိူက်ထီးရိုးမှာတော့ တော်တော်လေး ပြု ပြင်နေပါပီ။ တည်းခိုးခန်း ကိစ္စ. အလှူ ခံ အနုကြမ်း ကိစ္စ တွေတော့ ကောင်းမွန် သွားပီ.. အိမ်သာ ကိစ္စတွေ ဈေးတန်းမှာ ရှိတဲ့ ဒိတ်အောက်နေတဲ့ အစားစာတွေကို အပူလေး ပေးပြီး ပြန်ရောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေ(ကောက်ညှင်းပေါင်း= သိုးကျိကျိ ဖြစ်နေတာတွေကို မနက်ခင်း ကြမှ အပူပေး အငွေ့ တထောင်းထောင်း ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ပီးမှ ရောင်းတယ်.. ဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်ဖို့ ဆိုတော့ ဘယ် ဘုရားဖူးကမှ မြည်း မကြည့်ဘူး.. မြည်း မကြည့်လေ သုတို့က အကြိုက်တွေ့လေ.. ဘုရားကိုတော့ အသိုးတွေ ကပ်ပစ်ခဲ့တယ်) နောက်ပီး ဈေးတန်းတွေမှာ ရောင်းနေကြတဲ့ ဘာအမြစ် ညာအမြစ် အတုတွေ ဘာအဆီ ညာအဆီ အတု တွေ ကိစ္စ..၊ အဲ့ဒါတွေတော့ ကျိူက်ထီးရိုးမှာ ပြင်စရာတွေပေါ့။ အတု ပစ္စည်း အပေါဆုံးနေရာက ကျိူက်ထီးရိုးပဲ.. ရောင်းသမျှ ဆေးပစ္စည်း မျိူးစုံကလည်း မသောက်ရဲ လောက်အောင်ကို တု လွန်းတယ်။
နောက်တစ်ခုက အခု ပြောတော့မယ့် ရွှေစက်တော် ကိစ္စ။ တအားဆိုးလွန်းတယ်.. တန်းခိုးခန်းဈေးနှုံးတွေ ဖတ်ကြည့်တာ ဈေးနှုံးလား ဖုန်းနံပါတ်တွေ ရေးထားတာလားတောင် အထင်မှားတယ်..။ ထိုင်း နိုင်ငံမှာ တော်တော်လေး သန့်တဲ့ တန်းခို ခန်းခဟာ မြန်မာငွေ သုံးသောင်း ဝန်ကျင်ပဲကျတယ်.. ဒါ မနက်စာ အတန်အသင့်လောက် ကောင်းတာလေး ပါသေးတယ်.. ထားပါတော့ သူများ နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှန်မပြောနဲ့.. ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွင်းက ငွေကြေး သုံးနိုင်မှု ဘုရားဖူးတွေရဲ့ အခြေအနေအားလုံးကို ခြုံ ပြောရရင် အရမ်း ချမ်းသာတဲ့ လူတွေက အဲ့ဒီ ဘုရားတွေမှာ အားအား ယားယား ညအိပ် တည်း မနေဘူးဗျ..
ခင်များတို့ဆီကို ညအိပ် ဘုရားဖူး ထွက်လာတာက တောသူ တောင်သား လယ်သမားတွေ လက်လုပ် လက်စားတွေ.. သူတို့ ဘဝတွေ မှာ တန်ခိုးကြီး ဘုရားတွေကို တစ်ခေါက် ရောက်ဖို့ ဆိုတာ တနှစ်လုံး စုထားရတဲ့ ငွေနဲ့ တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ မက်ရတဲ့ အိမ်မက်ပါဗျာ.. သူတို့ရဲ့. ရှိစု မဲ့စု ငွေလေးတွေကို ခင်များတို့ တောင်းလိုက်တာ ကြည့်စမ်းပါဦး.. မပေးနိုင်ရင် နမ္မဒါ ချောင်းထဲ ဆင်းအိပ်ရမယ့် အပေါက်မျိူးပဲ..။ ဘုရားကို မှီပီး အမြတ်ကြီး စားလွန်းတယ်..။
ဘုရားသာ သက်ရှိ ထင်ရှား ရှိတော်မူရင် အဟော ဝတ လို့ မိန့်တော်မူမယ့် ကိစ္စ။ ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ သိရင်လည်း ခင်များတို့ ဘုရားပွဲကို အကြောင်းပြ လုပ်စားတာက လွန်လွန်းတယ်.. သွား ဒယ်အိုးထဲ လို့. ပြောမှာ သေချာတယ်.. ။
ဒီ အမှားတွေကို အစိုးပိုင်းမှ ဝင်ထိန်းပေးမှသာ အစဉ်ပြေ တော့မှာပါ.. နို့မို့သာ ဆိုရင် စေတီ ဘုရား ပုထိုးတွေဟာ လူသား တို့ ကိုးကွယ် အားထားရာ သောက အပူ တို့ ဖြေဖျောက်ရာ နေရာ မဟုတ်တော့ ပဲနဲ့. စိတ်သောက ရောက်စရာ စိတ် အချဉ် ပေါက်စရာ နေရာ ဖြစ်လာတော့မယ် ဆိုတာ အသေချာ ပါပဲ လို့….။
သီတဂူ အရှင် ဇဋိလ (ကဝ) ကထိက ၊ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး။
မွနျမာ နိုငျငံမှာ လုပျစားဖို့ အကောငျးဆုံးနရောတှကေတော့ တနျခိုးကွီး စတေီ ပုထိုး ရှိတဲ့ နရောတှပေါပဲ။ ဘုရား ဝငျဖူးလို့ ကားရပျထားရငျ ကားပါကငျဖိုး ကောကျတယျ။ ဓာတျလှကေားနဲ့ တကျရငျ ဓာတျလှကေားဖိုး ပေးရတယျ။ ဓာတျလှကေားကွေးက သဒ်ဓါကွေး ဆိုပမေယျ့ အဲ့ဒီကွေးက အဆိုးဆုံးပဲ.. ထညျ့လညျး ထညျ့ရသေး နညျးရငျလညျး ငှကေောကျတဲ့ သူရဲ့ မကျြစောငျးထိုးပါ ခံရတယျ။ စတေီ ပုထိုးတှမှော အလှူ ငှတှေေ အမြားကွီး ရှိနတောပဲ.
ဘုရားပွုပွငျမှု ဘာညာ သာရကာ အတှကျ အဲ့ဒီအထဲကနေ သုံးပေါ့။ ဓာတျလှကေားဖိုးကအစ ငတျတီး လိုကျကွနတော ကွတော့ တျောတျောလေး အရုပျဆိုး အကြီးတနျရာ လူကဲ့ရဲ့စရာတှေ ဖွဈနပေီ။ လှူ ဖို့ တနျးဖို့ လာတဲ့ သူဆီကနေ တောငျပျေါ တကျခပါ ကောကျခံနသေလိုကွီး ခံစားရတယျ..။
မနျးလေး တောငျပျေါဆို စကျလှကေားခ သဒ်ဓါကွေး ပျေါတငျ ကောကျတယျ။ စကျလှခေါးကို မပွငျဘူး။ စကျလှခေါး အနီးတဈဝိုကျ ပတျဝနျးကငျြ သနျ့ရှငျးရေး မလုပျဘူး၊ ကိုယျ့စီးဘူးတဲ့ စကျလှခေါး ထဲမှာတော့ ပိုကျဆံပေးပီးမှ စီးရတဲ့ အဲ့ဒီမနျးတောငျ စကျလှကေားက အညံ့ဆုံးပဲ။ ဘုရားဖူးတှကေလညျး စိတျမကွညျကွဘူး..။ ငါးရာ တဈထောငျနဲ့ဆိုတော့လညျး ပွောမနပေါဘူးလေ ဆိုပီးတော့ အောငျ့သညျး အောငျ့သကျနဲ့ အလှူ ငှေ ထညျ့ပဈခဲ့ကွတယျ..။
အလှူ ရေးမို့ မပွောခငျြလို့ ကွညျ့နတော လူကိုမြား မအဘူးမြား ထငျနလေား မသိဘူး ဆိုတဲ့ အပေါကျမြိူးနဲ့ ကွညျ့ပဈခဲ့ကွတယျ. ကိုယျအပါဝငျပဲ။ ကုသိုလျရေး ဆိုတော့လညျး အပွောရတော့ အခကျသားလား.. မွနျမာလူမြိူးတှရေဲ့ ဗီဇမြိူးစကေို့ယျက အငျမတနျ အားနာ တတျတော့ လုပျစားသူတို့ အကွိုကျဖွဈနတေယျ.။ စတေီ ပုထိုးတှမှော ရှိတဲ့ အိမျသာတှေ အားလုံး နီးပါးလောကျ ညဈပတျ စုတျပနေတောခညျြးပဲ ။
အဲ့ဒီ အိမျသာတှကေိုတော့ ပိုကျဆံ ကောကျသငျ့ပါတယျ.. ကောကျပါ.. ဒါပမေယျ့ ထိုကျထိုကျ တနျတနျ ကောကျ.. ထိုကျထိုကျ တနျတနျတော့ သနျ့ရှငျးမှု လုပျပေါ့ ။ အခုတော့ ထိုကျထိုကျ တနျတနျတော့ ကောကျတယျ.. မဝငျရဲ လောကျအောငျ ညဈပတျလှနျးနတောခညျြးပဲ..။ တဈခုတော့ ရှိတယျ ဂေါပကတှေ သီးသနျ့သုံးတဲ့ သော့ခတျ ထားတဲ့ အိမျသာလေးတှကေ သနျ့နတောမြားတယျ။ ကြူ ပျတို့ နိုငျငံက ဘုရား ပုထိုး ရောကျလို့ အိမျသာ သနျ့သနျ့လေး တကျခငျြရငျတောငျ ဂေါပကကို ခ ရတဲ့ နိုငျငံဗြ။
ကိုယျကတော့ ရှငျးတယျ.. တနျးခိုးကွီး ဘုရားတှကေို ညအိပျ ခရီး သှားဖူးတော့မယျ ဆိုရငျ ဝမျးခြူ ပျစာတှေ စားလိုကျပီး ဝမျးခြူပျအောငျ လုပျထားလိုကျတယျ.. ကြောငျး ပွနျရောကျမှ ဂမျးနှုတျဆေး ပွနျစားတယျ..။
ဒါတှေ အားလုံးဟာ ကနျထရိုကျတှေ ပေးထားခွငျးရဲ့ ဆိုးကြိူး တှပေါပဲ။ နရောစုံကို ကနျထရိုကျတှေ ပေးထားတော့ ဘုရား ဂေါပကတှကေ ဝငျမပွောရဲတော့တဲ့ အနအေထား ဖွဈနတေော့ စညျးကမျးက ပကျြခငျြသလို ပကျြနတော။ တနျးခိုးကွီး ဘုရားတှမှောက ငှကေ အဲ့ဒီလောကျ အငမျးမရ မလိုတော့ပါဘူးဗြာ..။ လောကျငှနပေါပီ.. အဲ့ဒီတော့ ဘုရား လာတဲ့ သူတှေ ကုသိုလျရေးကို စိတျရှငျးရှငျးနဲ့ လုပျနိုငျအောငျ ဘုရားကို အာရုံ ကောငျးကောငျး ပွုနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျရငျ အားလုံးလညျးကောငျး ဘုရားဖူးရခွငျးရဲ့ တကယျ့ အရသာကိုလညျး ခံစားရမှာပါ။ အစိုးရပိုငျးတှကေ ဒါတှကေို လဈြလြှူ ရှု မထား သငျ့ပါ..
နိုငျငံတကာက ဗုဒ်ဓ ဘာသာကို စိတျပါ ဝငျစားလို့ လာရောကျ လလေ့ာ သူတှေ အတှကျ မစှဲဆောငျ နိုငျတဲ့ အပွငျ နိုငျငံရော လူမြိူးပါ သိက်ခာကြ စရာတှေ ဖွဈဖွဈနလေို့ ကိုယျက ဘုနျးကွီးတနျမဲ့ ဝငျပွောနရေတာပါ.. ကိုယျလညျး နိုငျငံသား တဈယောကျပဲလေ. ကိုယျ့နိုငျငံထဲက အရှကျရ စရာ ကိစ်စ တှကေို ရပျကွညျ့မနနေိုငျလို့ပါ..။
ကြိူကျထီးရိုးမှာတော့ တျောတျောလေး ပွုပွငျနပေါပီ။ တညျးခိုးခနျး ကိစ်စ. အလှူ ခံ အနုကွမျး ကိစ်စ တှတေော့ ကောငျးမှနျ သှားပီ.. အိမျသာ ကိစ်စတှေ ဈေးတနျးမှာ ရှိတဲ့ ဒိတျအောကျနတေဲ့ အစားစာတှကေို အပူလေး ပေးပွီး ပွနျရောငျးတဲ့ ကိစ်စတှေ(ကောကျညှငျးပေါငျး= သိုးကြိကြိ ဖွဈနတောတှကေို မနကျခငျး ကွမှ အပူပေး အငှေ့ တထောငျးထောငျး ဖွဈအောငျ ပွနျလုပျပီးမှ ရောငျးတယျ.. ဘုရားဆှမျးတျော ကပျဖို့ ဆိုတော့ ဘယျ ဘုရားဖူးကမှ မွညျး မကွညျ့ဘူး.. မွညျး မကွညျ့လေ သုတို့က အကွိုကျတှလေ့ေ.. ဘုရားကိုတော့ အသိုးတှေ ကပျပဈခဲ့တယျ) နောကျပီး ဈေးတနျးတှမှော ရောငျးနကွေတဲ့ ဘာအမွဈ ညာအမွဈ အတုတှေ ဘာအဆီ ညာအဆီ အတု တှေ ကိစ်စ..၊ အဲ့ဒါတှတေော့ ကြိူကျထီးရိုးမှာ ပွငျစရာတှပေေါ့။ အတု ပစ်စညျး အပေါဆုံးနရောက ကြိူကျထီးရိုးပဲ.. ရောငျးသမြှ ဆေးပစ်စညျး မြိူးစုံကလညျး မသောကျရဲ လောကျအောငျကို တု လှနျးတယျ။
နောကျတဈခုက အခု ပွောတော့မယျ့ ရှစေကျတျော ကိစ်စ။ တအားဆိုးလှနျးတယျ.. တနျးခိုးခနျးဈေးနှုံးတှေ ဖတျကွညျ့တာ ဈေးနှုံးလား ဖုနျးနံပါတျတှေ ရေးထားတာလားတောငျ အထငျမှားတယျ..။ ထိုငျး နိုငျငံမှာ တျောတျောလေး သနျ့တဲ့ တနျးခို ခနျးခဟာ မွနျမာငှေ သုံးသောငျး ဝနျကငျြပဲကတြယျ.. ဒါ မနကျစာ အတနျအသငျ့လောကျ ကောငျးတာလေး ပါသေးတယျ.. ထားပါတော့ သူမြား နိုငျငံတှနေဲ့ ယှနျမပွောနဲ့.. ကိုယျ့နိုငျငံ အတှငျးက ငှကွေေး သုံးနိုငျမှု ဘုရားဖူးတှရေဲ့ အခွအေနအေားလုံးကို ခွုံ ပွောရရငျ အရမျး ခမျြးသာတဲ့ လူတှကေ အဲ့ဒီ ဘုရားတှမှော အားအား ယားယား ညအိပျ တညျး မနဘေူးဗြ..
ခငျမြားတို့ဆီကို ညအိပျ ဘုရားဖူး ထှကျလာတာက တောသူ တောငျသား လယျသမားတှေ လကျလုပျ လကျစားတှေ.. သူတို့ ဘဝတှေ မှာ တနျခိုးကွီး ဘုရားတှကေို တဈခေါကျ ရောကျဖို့ ဆိုတာ တနှဈလုံး စုထားရတဲ့ ငှနေဲ့ တဈသကျမှာ တဈခါပဲ မကျရတဲ့ အိမျမကျပါဗြာ.. သူတို့ရဲ့. ရှိစု မဲ့စု ငှလေေးတှကေို ခငျမြားတို့ တောငျးလိုကျတာ ကွညျ့စမျးပါဦး.. မပေးနိုငျရငျ နမ်မဒါ ခြောငျးထဲ ဆငျးအိပျရမယျ့ အပေါကျမြိူးပဲ..။ ဘုရားကို မှီပီး အမွတျကွီး စားလှနျးတယျ..။
ဘုရားသာ သကျရှိ ထငျရှား ရှိတျောမူရငျ အဟော ဝတ လို့ မိနျ့တျောမူမယျ့ ကိစ်စ။ ဆရာတျော ဦးသုမင်ျဂလ သိရငျလညျး ခငျမြားတို့ ဘုရားပှဲကို အကွောငျးပွ လုပျစားတာက လှနျလှနျးတယျ.. သှား ဒယျအိုးထဲ လို့. ပွောမှာ သခြောတယျ.. ။
ဒီ အမှားတှကေို အစိုးပိုငျးမှ ဝငျထိနျးပေးမှသာ အစဉျပွေ တော့မှာပါ.. နို့မို့သာ ဆိုရငျ စတေီ ဘုရား ပုထိုးတှဟော လူသား တို့ ကိုးကှယျ အားထားရာ သောက အပူ တို့ ဖွဖြေောကျရာ နရော မဟုတျတော့ ပဲနဲ့. စိတျသောက ရောကျစရာ စိတျ အခဉျြ ပေါကျစရာ နရော ဖွဈလာတော့မယျ ဆိုတာ အသခြော ပါပဲ လို့….။
သီတဂူ အရှငျ ဇဋိလ (ကဝ) ကထိက ၊ သီတဂူ ကမ်ဘာ့ဗုဒ်ဓတက်ကသိုလျ စဈကိုငျးတောငျရိုး။
VICTORIA ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး… ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့တရားခံကို …အများကကျေနပ်လက်ခံခြင်းမရှိကြ
ကြည့်ရှုသူ (၉) သန်းကျော်သွားပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး က လူတွေကို ခွီနေရအောင် လုပ်လိုက်တဲ့ ကျောင်းသားလေး
အိမ်ခြေ ၁၄၀ အနက် …ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် …တစ်အိမ်သာရှိသော ရွာက…...
“မိခင်ရင်းနဲ့မခြားတဲ့ အမေတယောက်ရထားတဲ့ အတွက် ကံတရားကြီးကို...
အမိုက်စား စစ်ကားရိုက်ဖို့အတွက် …ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအောင် …Gym...